China HP-0134 Orinasa fanoherana vita amin'ny fanao | Hipromos
HP-0134 Bandy fanoherana manokana
Tarika fanoherana manokanadia vita amin'ny lamba vita amin'ny landihazo vita amin'ny polyester sy kofehy latex vita amin'ny kofehy mba hanoherana ny fahatapahana, ny sakany sy ny lanjan'ny tarika dia miankina amin'ny fanoherana. Tarika azo alefa, maharitra, maharitra - mahazaka
mamela anao hitondra azy ireo miaraka aminao ary hahazo fampihetseham-batana tsara na aiza na aiza alehanao. Ny fantsom-panatanjahan-tena tsara indrindra ho an'ny valahana, ny glute ary ny tongotra satria ireo fehin-kibo fanoherana ireo dia mety hanampy anao hanao squats tsara, hitazona ny lohalinao hivoaka. Izy io koa dia mety ho fitaovana fampiofanana matanjaka ho an'ny vatana iray manontolo. Izay mitady hampitombo ny fivezivezena na ny tanjaka ary ny tanjaka dia afaka mampiasa ireo tarika ireo amin'ny fampiofanana anao. Amporisiho mafy izy ireo ho an'izay mitady hanampy ny fanazaran'izy ireo. Mifandraisa aminay raha te hahalala bebe kokoa.
Kitiho eto raha hi-mail
ITEMY NO. HP-0134
ANARANA ITEM Tarika fanoherana 120 * 8cm
KEVITRA lamba landihazo mifangaro polyester,
kofehy latex vita amin'ny kofehy
lafiny 120 * 8cm, manodidina ny 50pounds
FAMANTARANA Marika 1 tenona
FANONTANIANA FANORENANA & SIZE Ny sakany ao anatin'ny 8cm
VOLA SAMPELA 100USD isaky ny endrika
SAMPLE LEADTIME 10 andro
FE-POTOANA 25 andro
FONOSANA 1pc / polybag
QTY OF CARTON 120 pcs
KARTON ETO AN-TRANO 44 * 42 * 28 CM
CODE HS 9506911900
Ny vidin'ny santionany, ny santionany amin'ny fotoana fitarihana ary ny fotoana itarihana matetika dia samy hafa arakaraka ny tinady voafaritra, ny tohiny fotsiny. Manana fanontaniana manokana ve ianao sa mila fampahalalana bebe kokoa momba an'ity zavatra ity, azafady miantso na mandefa mailaka anay.
Teo aloha: HP-0002 Hippo fampiroboroboana volo fanamafisana
Manaraka: HP-0003 Zirafy fampiroboroboana ny zirafy fampiroboroboana
Tarika fanoherana marika
Tarika glute vita amin'ny lamba manokana
Tarika fanoherana manokana
Tarika fanoherana hip miaraka amin'ny sary famantarana
Tarika fanoherana manokana an'ny valahana
Tarika fanoherana lamina miforitra